Nanoloana izany dia naneho ny heviny ny kandida Tabera Randriamanantsoa ary nilaza fa tsy mety ireny ary misy haino aman-jery manasa atidoha fotsiny. Tokony hosaziana ny haino aman-jery manao toy ireny. Nilaza ny fahitany ny zotram-pifidianana ihany koa moa ity filohan’ny antoko politika Kintana ity ary nanambara izao daholo vao miaiky ireo kandida tsy niara-dia taminay 25 mianadahy fa nety ny nataonay raha niantso fanokafana indray ny lisi-pifidianana aloha vao niroso. Niharihary izao fa misy kandida milaza ho favori iray tena nanao hosoka bevata. Miisa 2 tapitrisa ny verin-droa na « doublon ». Fitiavanao ho eny Iavoloha ve no hanaovanao sorona ny firenena ? Manome tsiny ireo avara-pianarana aho, hoy izy, satria nangina ka namela ny vazaha hamiravira an’i Madagasikara. Averina indray fa ny SADC sy ny vondrona eoropeanina sy ny tariny no nanao iny fifidianana iny. Nampahafantatra ihany koa moa ity mpanao politika ity fa nitory ny CENI ireo firaisankinan’ireo kandida miisa 25 tamin’ny 5 novambra teo.